CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika fantsom-pandrefesana fantsom-panafody PE matevina. - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika fantsom-pandrefesana fantsom-panafody PE matevina.
Fotoana: 2018-04-22 Hits:
Ny tsipika fantsom-pandehanan'ny fantsom-pandehanana fantsom-pandehanana 2m PE lehibe novokarin'i Shanghai Jwell Pipe Equipment CO., LTD no mitarika eo amin'ny indostria. Ny endriny dia tokana sy vaovao, mampiasa extruder visy tokana mahomby, miaraka amin'ny automatisation avo lenta, izay afaka mihaona amin'ny fandidiana mora foana, famokarana mitohy, azo antoka ary azo antoka.
1.JWELL fampisehoana fantsom-panafody fantsom-panafihana mafana.
(1) Ny extruder dia mampiasa extruder volo tokana mahomby, ary teknolojia mandroso avy any ivelany. Ny motera fiara sy ny processeur Siemens PLC dia afaka miantoka ny milamina sy azo antoka amin'ny asan'ny fitaovana. Ny rafitra fanaraha-maso ny hafanan'ny extruder mampiasa ny rafitra fanaraha-maso Siemens PLC sy ny modules fanitarana, ny fahamendrehana temp dia azo fehezina teo anelanelan'ny ± 0.5 ℃.
（A） Ny bobongolo dia rafitra miolikolika, mampiasa vy metaly avo lenta, miaraka amin'ny fitsaboana chrome.
（B） Ny fifehezana ny mari-pana ao amin'ny bobongolo dia manatsara ny hafanan'ny herinaratra, avo ny fahamendrehana, ary tsy manana karbaona ny fantsom-by varahina.
（C） Betsaka ny faritra fanafanana, izay afaka mifehy ny mari-pana isaky ny faritra bobongolo.
(3) Ny tanky fanamafisana ny banga sy ny tanky fampihenana amin'ny alàlan'ny fitaovana vy tsy misy vy, fanapahana jet jet, famolavolana sakana. Ny nozotra mampiasa ny fiovana miovaova haingana, izay mety ho mora kokoa ny manadio sy miova, izay naharesy ny olan'ny famongorana sarotra ny fametrahana azy io.
(4)Ny sokajin-taratra haingam-panday dia manana tombony amin'ny fandidiana mora, fantsona kely tsy voakoba, fanamafisana matanjaka ary fandidiana milamina.
(5)Ny vatolampy famahanana an'ny mpikapa amin'ny alàlan'ny fananganana vy, izay manana tanjaka sy mateza ampiasaina.
2.Ny toetran'ny fantsom-panafihana hafanana PE
Ampiasaina betsaka amin'ny tamba-jotra fantsom-panafody / gazy, fantsom-pamokarana simika insiny termika injeniera, simika, tamba-jotra fanafanana afovoany, fantson-drivotra afovoan-drivotra sy tetik'asa monisipaly, sns.
(1) Vidina ambany.
(2) Kely ny asa tany, fanamboarana haingana, tsara ho fiarovana ny tontolo iainana.
(3) Ny fantsom-palitao dia afaka mamonjy angovo, manohitra ny harafesina, manana fahombiazan'ny insulated tsara ary fiainana maharitra.
(4) Misy tsipika fanairana momba ny famoahana, izay azo antoka. Raha vantany vao misy fivoahana amin'ny fantsona iray, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny tsipika fanairana, dia afaka mampiseho ny toerana misy ny fivoahana marina sy ny habetsaky ny fivoahana amin'ny zavamaneno, ary mampahafantatra ny inspektera ny hiatrehana haingana ilay fantsona mivoaka, hanamafisana ny fiasan'ny hafanana azo antoka. tamba-jotra fantsona.
3. Famaritana mahazatra momba ny fantsom-panafenana hafanana
4. Famokarana herinaratra
HIVERINACHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Masinina famolavolana herinaratra feno
NEXTCHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika mitaingina fantsom-pifandraisana vaovao ho an'ny rafitry ny rivotra